Puntland oo ku kala qeybsantay booqashadii Ra’iisul Wasaare Kheyre ee W/Gaalkacyo+xog cusub | Baahin Media
Puntland oo ku kala qeybsantay booqashadii Ra’iisul Wasaare Kheyre ee W/Gaalkacyo+xog cusub
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi la socday oo maalmahaanba ku sugnaa Galmudug ayaa shalay gelinkii dambe si layaab ah ugu gudbay galabta dhanka Waqooyi ee magaalada Gaalkacyo oo ka tirsan Puntland, halkaas oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyay, balse dhanka kale dhalisay khilaaf soo kala dhex galay maamulka Puntland.
Sida ay ogataaya Warbaahinta , madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ku gacan seyray inuu Ra’iisul wasaaruhu booqdo Waqooyiga Gaalkacyo, balse Ra’iisul Wasaaraha ayaa markii uu ogaaday in Dhallinyaro is abaabulay ay ku sugayaan garoonka Kubbadda Cagta ee Cawaale waxa uu go’aansaday inuu tago.
Dhanka kale ciidamada PSF-ta Puntland ayaa aku gacan seyray amarka madaxweyne Deni ee ahaa inaan loo oggolaan in Ra’iisul Wasaaruhu soo gudbo, taasoo dhalisay khilaaf soo kala dhex galay maamulka iyo ciidamada oo Ra’isul Wasaaraha soo dhoweeyay.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo la hadlayay kumannaan qof oo ku soo dhoweeyay Waqooyiga Gaalkacyo ayaa sheegay in dowladda iyo shacabka aan la kala dhex geli karin, hadalkaas oo u muqday farriin ku socotay Madaxweyne Deni.
Maamulka Puntaland ayaa sheegay in Ra’iisul Wsaaaruhu uu baal maray hab-maamuuskii ay ugu talagaleen, kadib markii uu dib ugu laabtay xalay Koofurta Gaalkacyo.